एक वर्षीय चेलापन पाठ्यक्रम – Page4– Word of Truth, Nepal
ख्रीष्टियन जीवन र दुःखकष्टहरू (१)
पद कण्ठ: अय्यूब ५:७; रोमी ८:१८-१९; हिब्रू १२:७-८; याकूब १:२-८
दुःखकष्ट आइपरेको देखेर विश्वासी जिल्ल पर्नु हुँदैन किनकि यो त ख्रीष्टियन जीवनमा एउटा आवश्यक कुरा हो भनेर बाइबलले खुलस्त बताएको छ। हामीलाई किन दुःखकष्ट आइपर्छ भन्ने कुरा समेत बाइबलले बताइदिएको छ।
दुःखकष्टहरू अनेकौं रूपमा आउने गर्छन्: रोग-बिमार लाग्नु र शारीरिक पीडा हुनु, मानसिक निराशा र अँध्यारोपनले छोपिनु, चीजबीच टुटफुट हुनु, खिइएर जानु, अभाव पर्नु, नोक्सानी भोग्नु, आशा टुट्नु, मनोरथ विफल हुनु, बदनाम गरिनु र अरूबाटको अन्य दुर्व्यवहारको शिकार बन्नु।
विश्वासीको जीवन परमेश्वरको नियन्त्रणमा हुन्छ जसरी आफ्नो चक्रका सामु कुमाले बस्दछन् अथवा जसरी एउटा किसानले आफ्नो दाखको बोटलाई छिमल्दछन् अथवा जसरी एउटा जुहारीले बहुमूल्य धातुलाई खार्दछन् (रोमी ८:२८)। उहाँ सुरुबाटै अन्तिम परिणाम जान्नुहुन्छ र हाम्रो जीवनमा उहाँका उद्देश्यलाई पूरा गर्न सक्ने बुद्धि र सामर्थ्य उहाँसित छ।
ऊ एउटा श्रापित संसारमा बाँचिरहेको हुनाले विश्वासीलाई दुःखकष्ट आइपर्छ (अय्यूब ५:७; रोमी ८:१८-२३)
यद्यपि हामीले मुक्ति पाएका छौं, हामी अझै पनि परमेश्वरले श्राप दिनुभएको संसारमा नै बाँचिरहेका छौं जसको फलस्वरूप हामी यहाँ आइपर्ने समस्याहरूको अधीनतामा नै छौं भन्ने कुरालाई यस महत्त्वपूर्ण खण्डले हामीलाई बिर्सन दिँदैन। हामी एक पापी संसारमा बाँचिरहेका पापीहरू हौं। पावलले यस वर्तमान जीवनलाई “विनाशको बन्धन”, “ऐया-आत्था”, “प्रसूति-वेदना”, र “तड्पिरहेको” जस्ता शब्दले बयान गर्दछन्। यहाँ हामीलाई उत्पत्ति ३:१६-१९ को सम्झना गराइँदैछ जहाँ परमेश्वरले आदमको पापले गर्दा भूमिलाई श्राप दिनुभयो। परिणामस्वरूप हामीलाई झारपात, हिलोमैलो, ढुङ्गा-बालुवा, कीराफट्याङ्ग्रा, खिया, टुटफुट, क्षय, कठोर परिश्रम र पीडाको सामना गर्नु छ। परमेश्वरले दूरगामी परिणाम हुने गरी स्त्रीलाई पनि न्याय गर्नुभयो। “तेरो सुत्केरी-वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु। दुःखसँग तैंले बालक जन्माउनेछस्। तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुनेछ, र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्‍नेछ” (उत्पत्ति ३:१६)।
दाँतको दुःखाइ जस्तो एउटा सानो कुरालाई विचार गर्नुहोस्। दाँत दुःख्‍ने भनेको प्रायः ज्यादा मीठाइ खाएर हुने गर्छ जसले दाँतलाई कुहाउने काम गर्छ। यो भनेको “मानिसले जे छर्छ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ” (गलाती ६:७) भन्ने सिद्धान्तको र हामी मर्दै गइरहेको एउटा नाशवान शरीरमा बाँचिरहेका छौं भन्ने तथ्यको नतिजा हो। स्वर्गमा यस्तो हुनेछैन! जीवन यस्ता दुःखकष्टले भरिभराउ छ। यस्ता कुरालाई लिएर परमेश्वरको विरुद्धमा गनगन गर्नु वा उहाँलाई शङ्का गर्नु बुद्धिमानी होइन। भन्ने नै हो भने, उहाँले हामीलाई हामीले पाउनु पर्ने भन्दा बढी नै दया देखाउनुहुन्छ।
यस पापले श्रापित संसारमा बस्दाको वास्तविकतालाई यसरी एउटा हास्यात्मक ढङ्गले व्यक्त गरिएको छ जसलाई मर्फीको नियम (Murphy’s Law) भन्ने गरिन्छ: “गडबड हुन सक्ने जुनसुकै पनि कुरा गडबड भएर छाड्छ” (Whatever can go wrong will go wrong)।
हामी यस अवस्थाबाट फुत्कनेछैनौं जबसम्म ख्रीष्ट आउनुहुन्न, अर्थात् जबसम्म हामीले “शरीरको छुटकारा” पाउँदैनौं (पद २३)। यसले शारीरिक बौरिउठाइलाई जनाउँदछ। तबमात्र “शोक र सुस्केरा” को अवस्थालाई “रमाहट र आनन्द” ले विस्थापित गर्नेछ (यशैया ३५:१०)।
पापको र परमेश्वरको ताडनाको कारण विश्वासीले दुःखकष्ट आइपर्छ (हिब्रू १२:१-१३)
परमेश्वरले आफ्ना सन्तानलाई उनीहरूको पापको कारण ताडना दिने भएकोले विश्वासीले दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ (हिब्रू १२:१)। आफ्नो पापको कारण दाऊदले बेसरी दुःख पाए; तिनका अवैध सन्तान मरे र तिनका छोराहरूले विद्रोह गरे (२ शमूएल १२:१०-१२)। परमेश्वरले स्वीकार गरिएको पापलाई क्षमा त गर्नुहुन्छ, तर त्यसको असर भने अझै रहिरहन्छ। १२ कक्षा भ्याउने बित्तिकै स्नूकर खेल्ने ठाउँमा मैले आफ्नो पाँचओटा दाँत गुमाउनु परेको थियो। म प्रभुको विरुद्धमा विद्रोह गर्दै हिँड्दै थिएँ र त्यसको फल भोग्न थाल्दै थिएँ। २३ वर्षको उमेरमा मैले मुक्ति पाएँ तर मैले ती दाँत फिर्ता पाइनँ। कोरिन्थको मण्डलीमा कतिजना विश्वासीहरूले प्रभु-भोजको दुरुपयोग गरेका हुनाले तिनीहरू रोगी भए भने कोही मरे (१ कोरिन्थी ११:२९-३०)। परमेश्वरको प्रबन्धअन्तर्गत खटिएका अधिकारीहरूको कानूनी कारवाहीमा पर्नु पनि पापलाई ताडना दिने उहाँको एउटा उपाय हो (१ पत्रुस ४:१५)। परमेश्वरका जनहरूले कानून उल्लङ्घन गर्छन् भने उनीहरू दण्डबाट प्रतिरक्षित हुँदैनन्। भन्नुपर्दा, तिनीहरू नै पहिला पक्राइनलाई परमेश्वरले चाँजोपाँजो प्रायः मिलाउने गर्नुहुन्छ!
परमेश्वरले गर्नुहुने पापको अनुशासन उहाँको प्रेमको काम हो (हिब्रू १२:६)
परमेश्वरले गर्नुहुने पापको अनुशासन उन्नतिका लागि हो (हिब्रू १२:१०)। परमेश्वर एक असल पिता हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्ना सन्तानलाई सुधार्नुहुन्छ। (के तपाईं एक असल पिता हुनुहुन्छ?)
परमेश्वरले गर्नुहुने पापको अनुशासन मुक्तिको एउटा प्रमाण हो (हिब्रू १२:७-८)। “यदि अनन्त सुरक्षा साँचो हो भने विश्वासीले मनलाग्दी जिए भइहाल्यो नि” भनेर कोही-कोही भन्छन्, तर मनलाग्दी जिउनेहरूले आफूहरू कहिल्यै नयाँ गरी जन्मेका थिएनौं भन्ने कुराको प्रमाण दिइरहेका हुन्छन्।
परमेश्वरले गर्नुहुने पापको अनुशासन आनन्दमय हुँदैन (हिब्रू १२:११)। यसलाई वाधा दिन सकिन्छ। हामीले हाम्रो जीवनमा प्रभुको अनुशासनलाई वाधा दिन सक्ने धेरै तरिका छन्। हामीले त्यसलाई तुच्छ ठान्न सक्छौं (हिब्रू १२:५), त्यसको कारण हताश हुन सक्छौं (हिब्रू १२:५), त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छौं (हिब्रू १२:७), सेवा गर्न छाड्न सक्छौं (“लत्रिएका हातहरू”, हिब्रू १२:१२), प्रार्थना गर्न छाड्न सक्छौं (“कमजोर घुँडाहरू”, हिब्रू १२:१२), र बाटोबाट भड्किन सक्छौं (हिब्रू १२:१३)।
मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य भनेको आफ्नो पापलाई परमेश्वरका सामु स्वीकार गर्नु हो (भजनसङ्ग्रह ३८:१-४, १८)। यो भनेको आफ्नो पापलाई लुकाउनु वा त्यसको लागि बहाना बनाउनु वा अरूलाई दोष्याउनुको ठीक उल्टो कुरा हो।
उसको विश्वासको जाँच गरिनलाई विश्वासीलाई दुःखकष्ट आइपर्छ (याकूब १:२-८)
दुःखकष्टहरूको एउटा प्रमुख उद्देश्य हाम्रो विश्वासलाई जाँच्नु हो। परमेश्वरले आफ्नो मूल्याङ्कनमा विश्वासलाई ज्यादै उच्च मूल्यको ठान्नुहुन्छ; बिना विश्वास उहाँलाई खुशी पार्नु असम्भव छ (हिब्रू ११:६)। ख्रीष्टियन जीवन नै विश्वासको बारेमा हो; यो “विश्वासदेखि विश्वाससम्म” को कुरा हो (रोमी १:१७)। आदम र हव्वाले परमेश्वरको विरुद्धमा जब पाप गरे र उनीहरूमाथिको उहाँको पूर्ण अधिकारलाई इन्कार गरे, तब परमेश्वरले आफूलाई मानव जातिदेखि लुकाउनुभयो र हामीले उहाँको वचनलाई विश्वास गर्नुपर्ने माग राख्‍नुभयो।
विश्वास सँधै नै जाँचिन्छ। कसैले आफूले ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको कुरा स्वीकार गरेपछि त्यसको जाँच आउँछ नै। येशूले “ढुङ्गेनी जमिनहरूमा छरिएको बिउ” को बारेमा कुरा गर्नुभयो जुनचाहिँ तुरुन्तै उम्रन्छ तर “कष्ट” को कारण त्यो मरेर जान्छ (मत्ती १३:२०-२१)। हामीले जब नयाँ निर्णयहरू गर्दछौं त्यसपछि पनि जाँच आउँछ, जस्तै जब हामी मण्डलीप्रति विश्वासयोग्य हुने निर्णय गर्छौं वा दैनिक रूपमा बाइबल पढ्ने निर्णय गर्छौं वा दसौं अंश दिने निर्णय गर्छौं वा आयोजना गरिएको सुसमाचार प्रचारमा भाग लिने निर्णय गर्छौं। विश्वासमा आएका एकजना हिन्दूको मलाई याद आउँदछ जसले हिन्दूलाई विवाह नगर्ने निर्णय गरे किनकि उनी बेमेल जुवामा बाँधिन चाहँदैनथे। उनको विश्वास निकै जाँचियो जब उनका बाबु र दाजुले उनीमाथि दवाव दिन थाले। उनीहरूले विन्ती गरे, धम्की दिए, र ठूलै रकम समेतको प्रस्ताव राखे।
त्यहाँ “नाना प्रकारका परीक्षाहरू” हुन्छन् (पद २)। समस्याहरू धेरै किसिमका रूपमा आउने गर्छन्। यहाँ शैतानका परीक्षाहरूको कुरा गरिएको होइन जसद्वारा त्यसले हामीलाई पाप गराउन खोज्न। यहाँ ती समस्या वा कष्टहरूको कुरा गरिएको हो जुनचाहिँ हाम्रो विश्वासलाई जाँच्न परमेश्वरद्वारा पठाइन्छन् वा उहाँको अनुमतिले आउँछन्।
हामी परीक्षाहरूमा “पर्दछौं” (पद २)। हामीले सोच्दै नसोचेको बेलामा ती आउने गर्छन्।
हाम्रो कर्तव्य भनेको धैर्य गर्नु हो र परमेश्वरलाई आफ्नो इच्छा पूरा गर्न दिनु हो। धैर्यता विश्वासद्वारा आउँछ (२ थेस्सलोनिकी १:४)। अनि दुवै नै परमेश्वरको वचनद्वारा आउने कुरा हुन् (रोमी १०:१७; १५:४)।
दुईचित्ते बन्न सक्ने एउटा खतरा छ त्यहाँ (पद ६-८)। यसले शङ्का गर्ने, पछि हट्ने, आत्मिक रूपमा अस्थिर बन्ने कुरालाई जनाउँदैछ।
परमेश्वरले हरेक घडी सिद्ध विश्वास हुनैपर्छ भन्ने माग राख्‍नुहुन्न; केवल हामी आफ्ना शङ्कामाथि विजयी भएका र हामीले उहाँको सेवा गर्न नछोडेका उहाँ चाहनुहुन्छ। अब्राहाम र सारालाई नयाँ नियममा विश्वासका वीरका रूपमा कदर गरिएका छन् (हिब्रू ११:११, १७), तर उनीहरूको जीवनको एउटा घडीमा परमेश्वरको प्रतिज्ञा सुनेर दुवैजना हाँसेका थिए (उत्पत्ति १७:१७; १८:१२)। पछि उनीहरू आफ्नो शङ्कामाथि विजयी बने र पछि गएर विश्वासका वीरहरूको नामाङ्कन गरिँदा उनीहरूले पनि स्थान पाए। शाऊलद्वारा खेदो गरिएका दाऊद र शैतानद्वारा पीडीत भएका अय्यूबको सवालमा पनि यही कुरा पाउँछौं।
आत्मिक उन्नति गराउनलाई विश्वासीलाई दुःखकष्ट आइपर्छ (रोमी ५:१-५)
सङ्कष्ट सामान्य ख्रीष्टियन जीवनको एउटा भाग नै हो (रोमी ५:३)। “सङ्कष्ट” भनेर अनुवाद गरिएको ग्रीक शब्द (थ्लिप्सीस) को माने थिच्नु हो। यसले हरेक प्रकारको दुःखकष्टलाई जनाउँछ। यसलाई अन्य ठाउँमा “कष्ट” (मत्ती १३:२१, १ कोरिन्थी ७:२८), “प्रसूति-वेदना” (यूहन्ना १६:२१), “भार पर्नु” (२ कोरिन्थी ८:१३) भन्ने शब्दले अनुवाद गरिएको छ।
हाम्रो कर्तव्य भनेको आफूलाई ठीक मनोभावनामा राख्‍नु हो। “आनन्द मनाउँछौं” को माने कुनै कुरामा निर्धक्क हुनु वा भरोसा गर्नु हो (१ कोरिन्थी १:३१; ३:२१; ४:७)। यसको ग्रीक शब्द “काउखाओमाइ” लाई “गर्व गर्नु” भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ (रोमी २:१७,२३)। आफ्नो मार्गमा जस्तोसुकै कष्ट आए पनि विश्वासी परमेश्वरमा निर्धक्क रहनुपर्छ।
यदि विश्वाससहित त्यसलाई लिइयो भने सङ्कष्टले ख्रीष्टियन जीवनमा अनुभव दिलाउँछ जसको कारण विश्वासी अरूका लागि आशिषको बन्न सक्दछ।
यदि विश्वासहित त्यसलाई लिइयो भने सङ्कष्टले परमेश्वरमाथि अझ निर्धक्क बनाउँदछ (रोमी ५:४-५, “आशा”)।
यदि विश्वासहित त्यसलाई लिइयो भने सङ्कष्टले आत्मिक रूपमा बढाउँदछ (रोमी ५:३-५)। सुनलाई खार्न आगो चाहिन्छ। पाको विश्वासीलाई कदर गर्नुपर्ने एउटा कारण यो हो।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 11:02:182020-11-14 08:55:01ख्रीष्टियन जीवन र दुःखकष्टहरू (१)
बाइबलले हामीले यस संसारमा गरेका कामहरूको न्याय गर्नेछ (१ कोरिन्थी ३:१३ “हरेक मानिसको काम”)। यसले हामीले बोलेका कुराहरूको न्याय गर्नेछ (मत्ती १२:३६ “हरेक वचन”)। यसले हामीले आफ्‍नो समयलाई कसरी प्रयोग गरेका छौं (मत्ती १२:३६ “हरेक व्यर्थ”) त्यसको पनि न्याय गर्नेछ। यसले हामीले विश्वास गरेका कुराहरूलाई पनि न्याय गर्नेछ (२ तिमोथी २:१५)।
१) ख्रीष्टको न्यायआसनको सरोकार मुक्तिसित नभएर सेवासित छ (१ कोरिन्थी ३:८,१०,१३,१५)। मुक्ति एक वरदान हो, इनाम होइन (एफेसी २:८-९)। चौधपटक यसलाई वरदानको संज्ञा दिइएको छ र वरदान भन्ने कुरा इनामको ठीक उल्टो कुरा हो। वरदान (वा उपहार) चाहिँ कसैले किनेर मलाई सित्तैंमा दिइएको कुरा हो। यदि त्यसको निम्ति मैले केही पैसा दिएँ वा त्यो कमाउनलाई मैले अलिकति पनि केही काम गरेँ भने त्यो उपहार हुन छोड्छ। ख्रीष्टले विश्वासीको अनन्त मुक्ति आफैंले किनिदिनुभयो (हिब्रू १:३), आफ्‍नै रगतको ठूलो दाम तिरेर। विश्वासीले यसमा थप्न सक्ने कुनै कुरा छैन। परमेश्वरको अनुग्रहले मैले मुक्ति पाएपछि, मैले मलाई बचाउनुहुने प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ (एफेसी २:८-१०), र ख्रीष्टको न्यायआसनले यही सेवाको जाँच गर्नेछ। योचाहिँ एकजना छोरा आफ्‍नो बाबुको निम्ति बाबुको खेतबारीमा वा व्यापारमा काम गरेजस्तै हो। छोरा यदि परिश्रमी छैन भने ऊ छोरा हुन त छोड्नेछैन र बाबुले उसलाई माया गर्न छोड्नेछैन तर उसले पाउने इनाम भने पाउनेछैन जुनचाहिँ यदि ऊ बाबुको सेवामा परिश्रमी र विश्वासयोग्य र इमानदार भएको भए पाउनेथ्यो। विश्वासीले मुक्ति गुमाउन सक्दैन र ऊ अनन्तसम्म सुरक्षित छ भन्ने कुरा सिकाउने नयाँ नियमका खण्डहरूमध्येमा १ कोरिन्थी ३:१५ सबैभन्दा स्पष्ट खण्डहरूमध्येमा एक हो। यदि ख्रीष्टको न्यायआसनमा सबै कुरा गुमाउने शारीरिक विश्वासी “आफैचाहिँ बाँच्नेछ” भने विश्वासीले आफ्‍नो मुक्ति गुमाउन कसरी सम्भव छ र?
१) एक किसिमको ख्रीष्टिय जीवनलाई “सुन, चाँदी र बहुमूल्य पत्थरहरू” सित तुलना गरिएको छ।
“सुन, चाँदी र बहुमूल्य पत्थरहरू” खाले ख्रीष्टिय जीवनले निम्न कुराहरूलाई समेट्छ: दिन-दिनै ख्रीष्टसितको सङगतीमा हिँड्नु, शरीरमा होइन आत्मामा हिँड्नु, फलदायी प्रार्थनाको जीवन कायम राख्नु, ख्रीष्टको वचनमा मग्न हुनु, ख्रीष्टको मण्डलीलाई प्रेम गर्नु, ख्रीष्टको काममा जोशिलो हुनु, संसारका दुष्ट कुराहरूदेखि अलग रहनु र आफ्‍नो जीवनलाई संसारसित एकनासे हुन इन्कार गर्नु, झूटा शिक्षाहरूदेखि अलग रहनु, भक्तिसाथ जिउने पति वा पत्नी बन्नु, छोराछोरीहरूलाई प्रभुको सेवा गर्नलाई हुर्काउनु, र आत्माहरूलाई ख्रीष्टमा ल्याउनु। यी सबै कुराहरू प्रभुका सामु सुन, चाँदी बहुमूल्य पत्थरहरू हुन् र तिनका लागि प्रशस्त गरी इनाम दिइनेछ।
२) अर्को खाले ख्रीष्टिय जीवनलाई “काठ, घाँस र पराल” सित तुलना गरिएको छ।
“काठ, घाँस र पराल” खाले ख्रीष्टिय जीवनले निम्न कुराहरूलाई समेट्छ: आत्मिक जीवनको सट्टा शारीरिक जीवनमा हिँड्नु र पापका मोजमज्जामा आफूलाई सुम्पनु, व्यर्थका थोकहरूमा समय खेर फाल्नु र जीवन छोटो छ र जे ख्रीष्टको निम्ति गरिन्छ त्यो मात्र रहन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सेर रित्तो कुरा गर्नु, र अनुचित मात्रामा समय पेशागत खेलकुद, भिडियो गेम र रोमान्स उपन्यासहरू जस्ता कुराहरूमा खर्चनु, परमेश्वरको इच्छाबमोजिम नभएर मूर्ख तरिकामा पैसा खर्च गर्नु, संसारलाई प्रेम गर्नु र आफ्‍नो जीवनलाई त्यसकै मार्गमा ढाल्नु, पवित्रशास्त्रमा बलियो बन्दै त्यसलाई ठीक-ठीक अर्थ लगाउन जान्दै, बढ्दै जानुको सट्टा बाइबलको ज्ञानमा बालकै रहनु, आफ्‍ना आत्मिक वरदानहरूलाई प्रयोग गर्नुको सट्टा तिनलाई लोभीले जस्तै साँचेर मात्र राख्नु, परमेश्वरको घरको बेवास्ता गर्नु, परमेश्वरको वचनको विपरितका कुराहरू सिकाउनु, पति वा पत्नी, बाबु वा आमा भएर पनि आफ्‍नो जिम्मेवारीमा हेल्चेक्र्याइँ गर्नु।
“स्याबास!” भन्ने वचन: मत्ती २५:२१ मा हेर्नुहोस्। पक्कै पनि विश्वासीले पाउन सक्ने सबैभन्दा ठूलो इनामचाहिँ प्रभुको स्याबासी हो। यो नपाउनु भनेको चाहिँ येशूलाई गिरफ्तार गरिएको रातमा पत्रुसले गरेको अनुभव जस्तै हुनेछ। पत्रुसले येशूलाई इन्कार गरेपछि उसले आफ्‍नो मुक्तिदाताको चेहरामा भएको आशाभङ्गको हेराइ र दुःखको हेराइलाई सहनुपर्‍यो अनि यही कुराले उसको हृदय चुरचुर भई तोडियो (लूका २२:६१-६२)।
१ कोरिन्थी ३ मा बयान गरिएको न्याय सम्पन्न भइसकेपछि, विश्वासीहरूको पार्थिव जीवन तथा सेवकाइहरूमाथि आगोले आफ्‍नो काम गरिसकेपछि, कसैकसैले सबै कुराको हानि भोगिसकेपछि र आगोबाट उम्केर बाँचेको जस्तै भइसकेपछि, अँ, हरेक मानिसले निःस्सन्देह उसले कमाउन सक्ने थुप्रै इनामहरू गुमाइसकेपछि — यी सब भइसकेपछि पनि हरेक मानिससँग परमेश्वरको प्रशंसा हुनेछ! यो कसरी हुन सक्छ?
१ कोरिन्थी ३:१२ मा उल्लेख गरिएको “सुन, चाँदी र बहुमूल्य पत्थरहरू” के हुन्?
“सुन, चाँदी र बहुमूल्य पत्थरहरू” खालको ख्रीष्टिय जीवनका केही उदाहरणहरू के-के हुन्?
“काठ, घाँस र पराल” के हुन्?
“काठ, घाँस र पराल” खालको ख्रीष्टिय जीवनका केही उदाहरणहरू के-के हुन्?
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 10:58:262020-11-13 16:31:56ख्रीष्टको न्यायआसन
कण्ठ गर्नुपर्ने पदहरू: मत्ती २८:१८-२०; मर्कूस १६:१५; प्रेरित १:८
ख्रीष्ट बौरेर उठ्नुभएपछि उहाँले आफ्‍ना चेलाहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा सुसमाचार प्रचार गर्नलाई सुम्पिनुभएको कामलाई महान् आज्ञा भन्ने संज्ञा दिइएको छ। यसलाई महान् आज्ञा भनिन्छ किनभने यो नयाँ नियममा पाँच-पाँच पटक दोहोर्‍याइएको छ (मत्ती २८:१८-२०; मर्कूस १६:१५; लूका २४:४४-४८; यूहन्ना २०:२१; प्रेरित १:८)। बाइबलमा कुनै पनि कुरा दुई उद्देश्यले दोहोर्‍याएर बताउने गरिन्छ। पहिलो, जोड दिने उद्देश्यले दोहोर्‍याइन्छ। धेरै पटक दोहोर्‍याउनुभएर उक्त आज्ञा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा परमेश्वरले देखाउँदैहुनुहुन्छ। दोस्रो, शिक्षा दिने उद्देश्यले दोहोर्‍याइन्छ। प्रत्येक पटक महान् आज्ञा दोहोर्‍याइँदा थप शिक्षा दिइएको पाइन्छ। हामी यीमध्ये चारओटा खण्डहरूलाई अध्ययन गर्नेछौं:
१) यहाँ हामी महान् आज्ञाको अधिकार देख्दछौं (मत्ती २८:१८)। येशूसँग सारा अधिकार छ र जब हामी सुसमाचार प्रचार गर्दछौं त्यो उहाँकै अधिकारले गर्दछौं। तसर्थ कुनै पनि जाति वा राष्ट्रकहाँ जान र कुनै पनि व्यक्तिलाई उहाँको नाममा सुसमाचार सुनाउन हामीसँग अधिकार छ। “धर्म” भनेको व्यक्तिगत मामिला हो भन्ने सोंच धेरैको छ‍, तर येशूले त सुसमाचारको घोषणालाई हाम्रो जिम्मेवारी नै ठहराउनुभएको छ। बाइबलले बताउँछ कि नयाँ जन्म पाएको प्रत्येक व्यक्ति ख्रीष्टको राजदूत हो (२ कोरिन्थी ५:१७-२०)। हामी उहाँकै नाउँ र अधिकारमा जान्छौं।
२) साथै यहाँ हामी महान् आज्ञाको काममा कुन‍-कुन कुरा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि देख्दछौं (मत्ती २८:१९-२०)।
पहिलो, हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। “जाओ र … चेला बनाओ” लाई मर्कूस १६:१५ सित तुलना गर्दा यसले सुसमाचार प्रचार गर्ने कामलाई जनाउँदछ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौं। प्रत्येक मण्डलीले सुसमाचार प्रचारकहरू पठाउने काम गर्नुपर्छ र साथै मिसनरी (प्रचारक) हरूलाई सहायता गर्नुपर्छ।
दोस्रो, विश्वास गर्नेहरूलाई हामीले बप्‍तिस्मा दिनुपर्छ। बप्तिस्मा कुनै ऐच्छिक कुरा (अर्थात् लिए पनि हुने, नलिए पनि हुने कुरा) नभई आज्ञा नै हो। ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्नेहरूका लागि आज्ञापालनको पहिलो कदम बप्‍तिस्मा हो।
तेस्रो, विश्वास गर्नेहरूलाई हामीले चेला बनाउनुपर्छ। कसैले मुक्ति पाएर बप्‍तिस्मा लिएपछि हाम्रो काम समाप्‍त हुँदैन। वास्तवमा त्यो त शुरु मात्र हो। हामीले उनीहरूलाई ख्रीष्टले आज्ञा गर्नुभएका सबै कुराहरू सिकाउनुपर्छ। यी आज्ञाहरू पवित्र शास्त्रको नयाँ नियममा छन्। यसो गर्नाले विश्वासीहरू विश्वासमा सुदृढ पारिन्छन् र झूटा शिक्षाहरूबाट जोगाइन्छन्। कुनै-कुनै शिक्षाहरू मात्र “सारभूत” (essential) छन् र बाँकी सारभूत छैनन् (non-essential) भन्ने र विभाजन ल्याउन सक्ने भएकाले तिनलाई जोड दिइनुहुन्न भन्ने व्यापक भूललाई यस खण्डले काट्छ। परमेश्वरका जनहरूलाई हामीले उहाँको वचनको एक-एक भागलाई पालन गर्न र आदर गर्न सिकाउनुपर्छ भनेर येशूले सिकाउनुभयो!
यो काम गर्न सक्नलाई एउटा मण्डली चाहिन्छ। महान् आज्ञा पूरा गर्नेहरू प्रेरितको पुस्तकमा मण्डलीहरू नै थिए भन्ने कुरा हामी त्यस पुस्तकमा देख्छौं। पावल र बर्नबास एन्टिओकको मण्डलीबाट पठाइएका थिए र तिनीहरूले यूरोपभरि धेरैओटा मण्डलीहरू शुरु गरे (प्रेरित १३-१४)। महान् आज्ञा पूरा गर्नलाई प्रत्येक मण्डली गम्भीर भई बाइबल तालिम दिने पाठशालाको रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ। महान् आज्ञा भनेको ठूलो काम हो।
३) साथै यहाँ हामी महान् आज्ञाको साथसाथै दिइएको प्रतिज्ञा पनि देख्दछौं (मत्ती २८:२०)। काम हामीले गर्ने हो तर सामर्थ्य ख्रीष्टको हो। उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मिसनरी काम गर्न तल्लीन ख्रीष्टियन र मण्डलीको निम्ति यो एक विशेष प्रतिज्ञा हो।
१) सुसमाचार हरेक राष्ट्र (जाति) लाई मात्र नभएर हरेक व्यक्तिलाई प्रचारिनुपर्छ। यो ज्यादै ठूलो काम हो र हरेक मण्डलीको मुख्य काम हो। यसको मतलब यो काम पूरा गर्नलाई प्रत्येक विश्वासीको आवश्यकता पर्छ।
यसले हामीलाई यो बताउँछ कि परमेश्वरले हरेक प्राणलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हरेक प्राणलाई बचाउन चाहनुहुन्छ जुनचाहिँ “सार्वभौम चुनाउ” (sovereign election) भन्ने क्याल्भिनवादी शिक्षाको विपरित छ।
यसले हामीलाई यो पनि सम्झना गराउँछ कि ख्रीष्टमा विश्वास राखेर बाहेक मुक्ति पाउने अन्य उपाय छैन। यदि अन्य उपाय भएको भए परमेश्वरले हामीलाई सुसमाचार हरेक व्यक्तिलाई यति ठूलो मूल्य चुकाएर प्रचार गर्न लाउनुहुनेथिएन।
२) बप्तिस्मा भनेको विश्वासीहरूको लागि हो, शिशुहरूको लागि होइन। बप्‍तिस्माको लागि आवश्यक कुरा विश्वास हो र त्यसैले शिशुहरू बप्तिस्माका उचित उम्मेदवार हुन सक्दैनन्। शिशु-बप्तिस्मा (infant baptism) एक झूटा शिक्षा थियो जुनचाहिँ नयाँ नियम पूरा भइसकेपछि र प्रेरितहरूको मृत्यु भइसकेपछि रचिएको थियो।
३) बप्‍तिस्मा भनेको मुक्तिपश्चात् मुक्तिको गवाही र प्रमाणस्वरूप लिइने कुरा हो। बप्तिस्मा नलिएकोले प्राण नरकको दोषी हुने होइन तर विश्वास नगरेकोले हो। “जसले विश्वास गर्दैन, त्यो दोषी ठहरिनेछ”। पावलले सिकाए, सुसमाचारले त मुक्ति दिन्छ (रोमी १:१६), तर बप्तिस्मा भनेको सुसमाचार त होइन (१ कोरिन्थी १:१७; १५:१-४)।
१) येशूले दुःख भोग्नु आवश्यक थियो किनभने पापीहरूले मुक्ति पाउने अरू उपाय थिएन (लूका २४:४६)। इसाईमत भनेको मैले परमेश्वरको निम्ति के गर्न सक्छु भन्ने होइन तर ख्रीष्टमा परमेश्वरले मेरो निम्ति के गरिदिनुभएको छ भन्ने हो।
२) पश्चात्ताप महान् आज्ञाको एउटा भाग हो (लूका २४:४७)। पश्चात्तापबिना पापहरूको क्षमा छैन। पश्चात्तापको माने झूटा ईश्वरहरूलाई परित्याग गरी परमेश्वरको अधिकारमुनि आफूलाई समर्पण गर्नु हो।
३) यस काममा सहभागी हुनु प्रत्येक विश्वासीको जिम्मेवारी हो (लूका २४:४८)।
१) यो काम मण्डलीको प्रमुख काम हो। प्रेरितको पुस्तकमा हामी यही कुरा देख्दछौं। शुरुका मण्डलीहरूले रोमी साम्राज्यका सामाजिक-राजनैतिक समस्याहरू समाधान गर्न ठूलाठूला योजना-परियोजनाहरू अपनाएनन्। तिनीहरूले सुसमाचार प्रचार गरे, विश्वासीहरूलाई चेलापनमा हुर्काए र नयाँ मण्डलीहरू स्थापना गरे।
२) पवित्र आत्माबिना हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं। हामी उहाँको सङ्गतीमा हिँड्नुपर्छ र हामीले उहाँको सामर्थ्यको खोजी गर्नुपर्छ। प्रार्थना भनेको यस कुराकै बारेमा हो, अर्थात् हामीलाई उहाँको दरकार छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु र उहाँको सहायताको खोजी गर्नु हो। पवित्र आत्मा शुरुका विश्वासीहरूमाथि पेन्टेकोस्टको दिनमा आउनुभयो अनि त्यसबेला‍देखि उहाँले प्रत्येक विश्वासीलाई उसले ख्रीष्टमाथि विश्वास राखेकै घडीदेखि छाप मार्नुहुन्छ (एफेसी १:१२-१४)।
३) हाम्रो काम भनेको येशू ख्रीष्टलाई उचाल्नु हो। हामी उहाँका साक्षीहरू हुनुपर्छ। जब हामी मानिसहरूसित परमेश्वरका कुराहरू गर्दछौं त्यसबेला हामीले ख्रीष्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ, मण्डली वा “इसाईमत” को बारेमा होइन।
४) महान् आज्ञा आफ्‍नै स्थानबाट शुरु हुन्छ र साथसाथै सारा विश्वसम्म नै आफूलाई फिँजाउँछ। यो काम मण्डलीहरूद्वारा पूरा हुन्छ जब उनीहरू आफ्‍नै समाज-समुदायहरूलाई ख्रीष्टमा ल्याउन खोज्छन् र साथै अन्य स्थानहरूमा भएका मिसनरीहरूलाई सहयोग गर्दछन्।
एकजना विश्वासीले महान् आज्ञा कसरी पूरा गर्न सक्छ?
आत्मसमर्पण गरेर – महान् आज्ञा शुरु हुने यहाँबाट हो: “म यहाँ छु; मलाई पठाउनुहोस्! हे प्रभु, म के गरूँ – तपाईं के चाहनुहुन्छ?” हेर्नुहोस् यशैया ६:८; प्रेरित ९:६; रोमी १२:१।
रीष्टसित सङ्गती गरेर – हामी प्रभुसित हिँड्दैनौं भने हामीले उहाँको बुद्धि वा सामर्थ्य वा अगुवाइ पाउनेछैनौं। उहाँको इच्छा पूरा गर्ने हामीसित कुनै चासो पनि हुनेछैन।
वचन सिकेर – हामी उहाँको वचनमा अशिक्षित छौं भने हामी परमेश्वरद्वारा राम्ररी प्रयोग गर्न सकिनेछैनौं। मानिसहरूको प्रश्नका जवाफ दिनलाई हामीले बाइबल सिक्नुपर्छ। प्रभावकारी ढङ्गले साक्षी हुन, प्रार्थना आदि गर्न हामीले सिक्नुपर्छ।
विश्वासयोग्य भएर – मिसनको मुटु भनेको मण्डलीहरू हुन् र मण्डलीहरू बलियो हुन सक्नलाई समर्पित, विश्वासयोग्य सदस्यहरूको खाँचो पर्छ।
प्रार्थना गरेर – महान् आज्ञाको निम्ति चाहिने बुद्धि र सामर्थ्यको स्रोत यही हो। परमेश्वरका जनहरू प्रार्थनामा भिड्ने योद्धाहरू हुनुपर्छ, आफ्‍नै मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्ने, अरू मण्डलीहरूका लागि प्रार्थना गर्ने, मिसनरीहरू, मुक्ति नपाएका नातागोताहरू, मुक्ति नपाएका साथीभाइहरू, पर्चा र व्यक्तिगत साक्षीद्वारा सुसमाचार सुनिरहेकाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेहरू हुनुपर्छ। प्रार्थनाले परिवर्तनहरू ल्याउँदछ। मेरा प्रार्थनाहरूद्वारा कति-कति कुराहरू परिवर्तन हुँदैछन् त?
दिएर – प्रभुको महान् आज्ञा एक बृहत् र खर्चिलो काम हो। के म ख्रीष्टको कामको निम्ति यस्तो प्रकारले दिने गर्दछु कि त्यसले उहाँप्रतिको मेरो प्रेमलाई प्रमाणित गर्दछ र सुसमाचारलाई संसारको अन्तसम्म फैलाउने काम गर्दैछ?
गएर – नयाँ जन्म पाएको परमेश्वरको प्रत्येक सन्तान ख्रीष्टको राजदूत हो र ऊ प्रभुको बारेमा मानिसहरूलाई बताउन व्यस्त हुनुपर्छ, पर्चा बाँडिरहनुपर्छ र मण्डलीको प्रचार कार्यमा नियमित रूपमा सहभागी हुनुपर्छ।
छोराछोरीलाई तालिम दिएर (हितोपदेश २२:६) – छोराछोरीहरू बुद्धिमानी बाबुआमाका ठोक्रोका काँडहरू हुन् जसलाई ख्रीष्टको सेवाको निम्ति तालिम दिइनुपर्छ (भजनसङ्ग्रह १२७:४-५)। ख्रीष्टिय बाबुआमाहरूले आफ्‍ना छोराछोरीहरूलाई यस्तो प्रकारले हुर्काउनुपर्छ ताकि यस जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ख्रीष्ट र उहाँको काम हो भनेर उनीहरूले जानेका हुनेछन्। छोराछोरीहरूले आफ्‍ना बाबुआमाको जीवनमा कस्तो खालको उदाहरण देख्दैछन् त? बाबुआमाले आफ्‍नो छोराछोरीहरूलाई मिसनरी बन्न नियुक्त गर्न त सक्दैनन् किनभने त्यो त परमेश्वरको विशेष बोलावट हो, तर बाबुआमाले गर्न सक्ने भनेको आफ्‍ना छोराछोरीहरूलाई मिसनरी‍-मन भएको हुनलाई तालिम दिन सक्छन्।
संसारबाट अलग भएर – सांसारिकपनले आत्मिक दर्शन र सामर्थ्यलाई नष्ट गर्दछ (१ पत्रुस २:११)।
यस वर्तमान दुष्ट संसारमा परमेश्वरको अनन्त पुत्रको नामलाई बोक्ने भाँडो हुन पाउनु भनेको ठूलो सौभाग्य हो। जीवन छोटो छ र परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यस सुअवसरलाई मौका हुँदै सदुपयोग गर्नुपर्छ।
महान् आज्ञा सम्बन्धी पुनरावलोकन प्रश्नहरू
महान् आज्ञा के हो?
महान् आज्ञालाई बयान गर्ने पाँचओटा खण्डहरू कुन-कुन हुन्? (पुस्तक र अध्याय मात्र)
विश्वभरि सुसमाचार प्रचार गर्ने अधिकार ख्रीष्टियनहरूलाई किन छ?
कुन खण्डले विश्वासी ख्रीष्टको राजदूत हो भनेर बताउँछ?
महान् आज्ञा पालन गर्दा त्यसमा कुन तीनओटा कामहरू संलग्न हुन्छन्?
महान् आज्ञा पूरा गर्नेहरूलाई येशूको प्रतिज्ञा के छ?
सुसमाचार हरेक ______________________ लाई मात्र नभएर हरेक ______________________ लाई प्रचारिनुपर्छ।
मर्कूस १६:१५-१६ ले बप्तिस्मा शिशुहरूको लागि होइन भनेर कसरी सिकाउँछ?
येशूलाई दुःख भोग्नु किन आवश्यक थियो?
पश्चात्ताप र पापहरूको क्षमा प्रचार गरिनुपर्छ भनेर येशूले आफ्‍ना जनहरूलाई आज्ञा दिनुभएको बाइबलको खण्ड कुनचाहिँ हो?
विश्वासीले ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दाखेरि नै ऊ पवित्र आत्माले छाप मारिन्छ भनेर सिकाउने खण्ड कुन हो?
विश्वासीले महान् आज्ञा पूरा गर्न सक्ने ९ ओटा तरिका कुन-कुन हुन्?
यीमध्ये कतिओटा तपाईं आफैले अभ्यास गर्दैहुनुहुन्छ?
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 10:49:592020-11-13 16:26:22ख्रीष्टको महान् आज्ञा
जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग २)
February 3, 2020 /in एक वर्षीय चेलापन पाठ्यक्रम /by Pradesh Shrestha
कण्ठ गर्नुपर्ने पदहरू: हितोपदेश १२:१५; २४:६; २९:२५
अघिल्लो पाठमा हामीले बुद्धिमानी निर्णयहरू गर्नका लागि बाइबलका चारओटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूलाई अध्ययन गर्‍यौं: १) आफ्नै समझमा भरोसा नगर्नुहोस्, प्रभुमा भरोसा गर्नुहोस् २) ज्योतिमा हिँड्नुहोस् ३) प्रभुमा मग्‍न रहनुहोस् ४) बाइबलको अवज्ञा गर्न लाउने खालको कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोस्।
यस पाठमा हामी यस विषयमा अर्को सिद्धान्तलाई हेर्नेछौं:
५) असल सल्लाह खोज्नुहोस् (हितोपदेश १२:१५; १९:२०)
परमेश्वरको इच्छामा बुद्धिमानी निर्णयहरू गर्नका लागि अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा भाग यो छ: ईश्वरीय सर-सल्लाह खोज्नु। यस कुरालाई व्यावहारिक बुद्धिको पुस्तक हितोपदेशमा १३ पटक उल्लेख गरिएको पाइन्छ। विवाह, पढाइ, काम, बसाइ-सराइ जस्तो कुनै पनि ठूलो निर्णय गर्नु अघि आत्मिक सर-सल्लाह खोज्नुपर्छ। तर ठीक सल्लाह कहाँबाट पाउन सकिन्छ र पाएको सल्लाहलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, त्यो जान्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
बुद्धिहीन सल्लाह सुन्ने व्यक्तिको उल्लेखनीय उदाहरण सुलेमानका छोरा रहबाम हुन् (१ राजा १२:१-१६)। राजगद्दी ग्रहण गरेको लगत्तै उनका प्रजाले उनीसित हामीलाई दयालु व्यवहार गरियोस् भन्दै आग्रह गरे। आफ्नो निर्णय गर्नुपर्दा उनले पहिला बूढापाकाको सल्लाह सुने जसले उनका बाबुलाई सर-सल्लाह दिने गरेका थिए अनि उनीहरूले उनलाई प्रजाको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बुद्धिमानी सल्लाह दिए। त्यसपछि उनले आफ्नै दौंतरीहरूको सल्लाह खोजे अनि तिनीहरूले उनलाई आफ्नो खुशीअनुसार व्यवहार गर्न र प्रजाको मनोभावनाको बेवास्ता गर्नलाई सल्लाह दिए। उनले यही बुद्धिहीन सल्लाह पछ्याउने निर्णय गरे र फलस्वरूप आफ्नो राज्यको अधिकांश भाग गुमाए। युवाले सधैं खराब सल्लाह र बूढापाकाले सधैं असल सल्लाह दिन्छन् भन्ने होइन। प्रभुसँग हिँड्ने र परमेश्वरको वचन जान्ने युवाले त्यसरी नजिउने बूढापाकाले भन्दा असल सल्लाह दिनेछ। १ राजा १३ मा एक परमेश्वरको जनले पछि हटेका, झूट बोल्ने वृद्ध अगमवक्ताको कुरा सुनेर परमेश्वरको इच्छाबाट तर्केर गए र उसको नराम्रो अन्त भयो।
बुद्धिमान् व्यक्तिहरूसँग सल्लाह खोज्नुहोस् (“बुद्धिपूर्ण सल्लाहद्वारा” हितोपदेश २४:६)।
बुद्धिमान् सल्लाहकारहरूले परमेश्वरको वचन जानेका हुन्छन् – बाइबलीय तरिकामा बुद्धिमानी सल्लाह खोज्दा हामी मानवीय राय चाहन्नौं; हामी बाइबलीय जानकारीमा आधारित बुद्धि चाहन्छौं। हामी कुनै मान्छेको वचन खोजिरहेका छैनौं तर परमेश्वरबाटको वचन खोज्दैछौं। यसकारण हामीले बाइबललाई परिश्रमसाथ अध्ययन गरेका विश्वासीहरूबाट सल्लाह खोज्नुपर्छ। बुद्धिमान् सल्लाहकारहरू आत्मिक रूपमा पाको हुन्छन् र बाइबलमा जानकार हुन्छन्।
बुद्धिमान् सल्लाहकारहरू खाँटी शिक्षा जानेका र विचार मिल्ने खालका हुन्छन्। नव-इभान्जेलिकलहरू वा क्यारिज्म्याटिकहरू वा क्याल्भिनवादीहरू वा अझै उदारवादी र रोमन क्याथोलिक वा शिक्षामा एकै मन नभएका अरूहरूसित सल्लाह खोजेर कतिपय बाइबलीय घरपरिवारकाहरूले गलत निर्णयहरू गर्न पुगेका छन्। अमेरिकामा गर्भपतनलाई वैधानिक तुल्याउने `रो विरुद्ध वेड’ (Roe vs. Wade) नामक अमेरिकाको राष्ट्रिय स्तरको मुद्दाको प्रतिपक्षी नोर्मा मक्कोर्भी (Norma McCorvey) को दुःखद उदाहरणलाई विचार गर्नुहोस्। तिनी गर्भपतनको विरुद्धमा उठीन् र कुनै एक “इभान्जेलिकल” अगुवाबाट बप्‍तिस्मा लिइन्; तर गर्भपतनको विरुद्धमा आवाज उठाउने सिलसिलामा क्याथोलिक पादरीहरूसितको उनको घनिष्टतामार्फत पछि गएर उनी रोमन क्याथोलिक चर्चलाई स्वीकार गर्न पुगिन्।
बुद्धिमान् सल्लाहकारहरूले आफ्नै जीवनमा असल निर्णय गरेका हुन्छन् र उनीहरूको चरित्र असल र स्थिर खालको हुन्छ। (“विश्वासघाती मान्छेमाथि भरोसा” हितोपदेश २५:१९) नगर्नलाई बाइबलले चेताउनी दिन्छ)। अल्छी गर्ने व्यक्तिहरू, तिर्नुपर्ने ठाउँमा नतिर्नेहरू, झूट बोल्नेहरू, ठग्नेहरू, अस्थिर स्वभाकाहरूले असल सल्लाह दिनेछैनन्। विशेष गरी युवाहरूले यसलाई ध्यानमा राख्‍नुपर्छ। वचनले युवालाई बाबुआमाको आदर गर्नुपर्छ भन्दछ, तर बाबुआमाहरू असल चरित्रका छैनन् भने तिनीहरू बुद्धिमान् सल्लाहकार होइनन्। मानसिक र आत्मिक रूपले अस्थिर मान्छेलाई पनि एक अर्थमा “विश्वासघाती मान्छे” को वर्गीकरणमा राख्‍न सकिन्छ। मेरा बाबु यस वर्गमा पर्नुहुन्थ्यो किनकि दोस्रो विश्व युद्धमा प्रशान्त महासागरका टापुहरू (प्यासिफिक आइल्याण्डस्) मा भिडन्तमा पर्नुहुँदा उहाँको मस्तिष्कमा दीर्घकालीन असर पुग्‍न गएको थियो। त्यसपछि उहाँलाई कहिल्यै ठीक भएन र बारम्बार उहाँलाई मानसिक अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्‍यो। उहाँले प्रभुलाई चिन्नुहुन्थ्यो तर कुनै पनि भार वहन गर्न वा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न उहाँ असक्षम हुनुहुन्थ्यो र उहाँ ठीक सोच्न सक्‍नुहुन्नथ्यो। परिणामस्वरूप हाम्री आमा र हामी छोराछोरीहरूले कतिपय समयहरूमा उहाँको आशीर्वाद नखोजीकनै कामकुरा गर्न सिक्नुपर्‍यो। जस्तै, उहाँ कुनै पनि काममा स्थिर रहन सक्‍नुहुन्नथ्यो त्यसैले परिवारलाई धान्न आमा काममा जानुपर्ने भयो। अरू विकल्पै थिएन तर बाबुले यस कुराको ज्यादै विरोध गर्नुभयो। उहाँ काम गर्न सक्‍नुहुन्नथ्यो र उहाँले कमाउन सक्‍ने कुनै सम्भावनै थिएन, तर आमाले काम गरेको पनि उहाँ चाहनुहुन्नथ्यो। अन्तमा आमा आफै अघि सर्नुभयो अनि प्रभुले आशिष दिनुभयो र उहाँले विवाहअघि काम गर्नुभएको टेलिकम कम्पनीमा काम पाउन सक्‍नुभयो अनि विस्तारै बाबुलाई यसको बानी पर्न थाल्यो। सामान्य अवस्थामा पत्‍नीले त्यसो गर्नु त विद्रोह हुन्थ्यो तर यस अवस्थामा त्यो विद्रोह थिएन। २३ वर्षको उमेरमा मैले मुक्ति पाएपछि म बाइबल कलेज जान चाहेँ र सेवाकार्यको निम्ति तालिम लिन चाहेँ। बाबुले यसको विरोध गर्नुभयो। प्रभुले मलाई इसाई पुस्तकहरू लेख्‍न अगुवाइ गर्नुभयो। बाबुले यसको विरोध गर्नुभयो। बाबुको इच्छा थियो मैले आफ्नो घरतिरै बसेर कतै काम गरोस्। म एकदम खुशी छु कि मैले मानसिक गडबडीले ग्रस्त हुनुभएका मेरा घाइते बाबुलाई नभएर प्रभुलाई पछ्याएँ। बाबुआमाको सल्लाहको विरुद्धमा कहिलेकाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो निर्णय गर्नु नै छ भने त्यो हल्कारूपमा कहिल्यै गरिनुहुन्न।
बुद्धिमान् सल्लाहकारहरू बाइबल विश्वास गर्ने असल मण्डलीहरूमा पाइन्छन्। यस्तो सल्लाह पाइने पहिलो ठाउँ मेरो आफ्नै मण्डली हो (यदि म एक बाइबललाई साँच्चै विश्वास र आदर गर्ने असल मण्डलीमा छु भने)। मण्डली सत्यको खाँबो र जग हो (१ तिमोथी ३:१५)। आफ्ना जनहरूलाई सिकाउन र सुरक्षा दिन परमेश्वरले गोठालाहरू, शिक्षकहरू दिनुभएको छ (एफेसी ४:११-१२)। आत्मिक सल्लाह लिनुपर्दा उनीहरू नै हाम्रो सल्लाहकार-सूचीको माथितिर हुनुपर्छ।
बुद्धिमान् सल्लाहकारहरूसँग तपाईंको विशेष परिस्थितिको सम्बन्धमा बुद्धि हुन्छ। खेतीपातिको सल्लाह चाहिँदा तपाईं डाक्टरकहाँ जानुहुन्न। वैवाहिक जीवन सम्बन्धी सल्लाह चाहिँदा तपाईं सफल वैवाहिक जीवन भएको व्यक्तिकहाँ जानुहोस्। सुसमाचार प्रचारमा आफ्नो पूरै जीवन बिताउने बारेमा सल्लाह लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईं एक अनुभवी मिसनरीकहाँ जानुहोस्। एउटी असल विश्वासी आमाले चार्ल्स स्पर्जनलाई प्रचारक नबन्नलाई सल्लाह दिएका रहेछन्। तर वास्तवमा एउटी स्त्रीले प्रचारक हुनु भनेको के हो खास बुझ्न सक्दैनन्, यद्यपि उनी एक ज्यादै आत्मिक स्त्री हुन सक्छिन्। स्पर्जन लेख्छन्, “मलाई राम्ररी याद छ, एउटी आत्मिक म्याडमले मलाई प्रचारकको काममा हात नहाल्नलाई भरमग्दुर प्रयास गरिन्; सक्दो इमानदारीता र धैर्यतामा मैले उहाँको रायको लेखाजोखा गर्ने प्रयास गरें — तर उहाँको भन्दा फराकिलो अनुभव भएकाहरूको फैसला नै बढी वजनदार ठहरियो” (सी एच स्पर्जन, लेक्चर्स् टु माइ स्टुडेन्ट्स्)।
बुद्धिमान् सल्लाहकारहरू सत्य कुरा बोल्न तयार हुन्छन् (हितोपदेश २७:६) – हामी जे सुन्न चाहन्छौं त्यो सुनाउनेहरूबाट मात्र सल्लाह लिन खोज्छौं, वा नरम-नरम मात्र बोल्ने, हामीलाई फुर्क्याउने, कठीन विषयहरूलाई एकातिर पन्छाएर कुरा गर्नेहरूबाट मात्र सल्लाह खोज्छौं भने, हामी समय खेर फाल्दैछौं। हामी त्यस्ता सल्लाहकारहरू खोजौं जोहरूले हामीलाई जे जस्तो भए पनि सत्य कुरा बताउँछन्। विश्वासीले आफूले सुन्न चाहेको कुरा सुनाउनेसँग मात्र सल्लाह लिनु भनेको ऊ परमेश्वरको इच्छाको बारेमा गम्भीर नभएको प्रमाण दिनु हो। हामीलाई अगमवक्ता मीकाया जस्तो सल्लाहकार चाहिन्छ (१ राजा २२:२७) जसले दु:खै भोग्‍नु परे तापनि सत्य कुरा बोल्न पछि हटेनन्। त्यसैले हो, दुष्ट राजा आहाबले गुनासो गरेका थिए, “म तिनलाई घृणा गर्दछु किनभने तिनले मेरो निम्ति असल अगमवचन कहँदैनन्, तर सधैं खराबी मात्र” (१ राजा २२:२७)। आहाबलाई चाहिने सल्लाहाकार मिकाया नै थिए तर त्यो जान्न सक्‍ने बुद्धि आहाबसित थिएन।
एकजनाभन्दा बढीसँग सल्लाह खोज्नुहोस् (“जहाँ धेरै सल्लाहकार हुन्छन्” हितोपदेश ११:१४; २४:६)।
यस कुरालाई जोड दिने हेतुले यसलाई हितोपदेशमा दुई-दुईपटक दोहोर्‍याइएको छ। आत्मिक सल्लाहकारहरूको एउटै मत हुनु भनेको परमेश्वरले आफ्नो इच्छालाई अनुसमर्थन गर्नुहुने उहाँको एउटा तरिका हो। जस्तै, कुनै युवाले यदि विवाह सम्बन्धी सल्लाह खोज्दैछ भने अनि उसले बाबुआमासँग, मण्डलीका गोठालाहरूसँग, शिक्षकहरूसँग, साथै अरू पाका आत्मिक व्यक्तिहरूसँग सल्लाह लिन्छ भने त्यहाँ एक मत भएको हुनुपर्छ।
फेरि, “धेरै सल्लाहकारहरू” पाइने सर्वोत्तम ठाउँ परमेश्वरको भय मान्ने, बाइबल विश्वास गर्ने मण्डली हो। बाइबल कलेजको बारेमा स्पर्जनले व्यक्त गरेको कुरा एउटा ईश्वरीय मण्डलीको सवालमा झनै सान्दर्भिक छ: “यहाँ हामी एकसाथ भेला हुन्छौं, प्रार्थनामा सँगै हुन्छौं, कुराकानीमा, विभिन्न माण्डलिक कामकाजको सिलसिलामा हामी एक आपससँग समय बिताउँछौं जसले गर्दा हामीले एक-अर्कालाई चिन्न सक्छौं, नापजोख गर्न सक्छौं, एकअर्काका कमजोर तथा बलियो पक्षहरू जान्न सक्दछौं। एउटा बुद्धिमान् मानिसले धेरैजनाको अर्थात् बहुमतको, सल्लाह, निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्नलाई अलिक ढिला-सुस्ती नै गर्नेछ।” (सी एच स्पर्जन, लेक्चर्स् टु माइ स्टुडेन्ट्स्)।)
तर यसको मतलब, मभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको सहमति बिना मैले कहिल्यै पनि निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, किनकि मानिस गलत हुन सक्छ; तर यसको मतलब यो हो कि यदि मैले त्यस्तो निर्णय गर्ने नै हो भने मलाई वचनले स्पष्टै समर्थन गरिरहेको हुनुपर्छ र आफूले लिन लागेको निर्णय परमेश्वरको इच्छा हो भन्ने कुरामा म पूरै निश्चित हुनुपर्छ।
विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सल्लाह लिँदा हामी कुनै एउटै व्यक्तिको इच्छाको दास बन्नबाट जोगिन्छौं। सन् १९७० को दशकको “पेन्टेकोस्टल गोठाला अभियान” (Pentecostal Shepherding Movement ) को भूल यही थियो। उनीहरूको शिक्षा अनुसार हरेक विश्वासी जनले आफूलाई मण्डलीद्वारा नियुक्त गरिएको एउटा “गोठालो” को अधीनमा सुम्पिनुपर्छ। उक्त “गोठालो” सित सल्लाह नलिईकन कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैनथ्यो। यसको परिणाममा त्यहाँ अधिकारको व्यापक दुरुपयोग भएको पाइयो। मण्डलीका गोठालाहरू, शिक्षकहरू र चेला बनाउनेहरू महत्त्वपूर्ण सहायकहरू हुन्, तर विश्वासीको एउटै मात्र मालिक हुनुपर्छ, जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।
मैले एउटा चेतावनी दिनैपर्छ कि “धेरैजना सल्लाहकारहरू” ले गोलमाल पनि ल्याउन सक्छ यदि ती सल्लाहकारहरू परमेश्वरको भय मान्ने, बाइबलीय तरिकामा बुद्धिमान र शिक्षामा एकै मनका छैनन् भने!
नजिकका व्यक्तिहरूसँग सल्लाह खोज्नुहोस् (हितोपदेश २७:१०)।
कतिपटक मानिसहरू नजिककाहरूलाई छोडेर टाढाकाहरूसित सल्लाह लिन खोज्छन्, हुन त यो सधैं गलत हुन्छ भन्ने होइन। तरैपनि कतिपटक त्यो गलत कारणले गरिन्छ। बेलाबखत मलाई अरू मण्डलीकाहरूले आफ्नो मण्डलीको अवस्थाबारे सल्लाह माग्न खोज्छन्। तर मलाई त्यहाँको वस्तुस्थिति राम्ररी थाह हुँदैन। कहिलेकाहिँ कोहीले वस्तुस्थिति राम्ररी थाहा नभएकैहरूसँग सल्लाह लिन खोज्छन्, तर यही कारणले हो हामीले सामान्यतयाः नजिककाहरूसँग सल्लाह खोज्नुपर्ने।
युवाहरूका लागि प्रथम सल्लाहकारहरू उनीहरूको आफ्नै बाबुआमा हुनुपर्छ, विशेष गरी बाबुआमा विश्वासी हुन् भने (एफेसी ६:१-३)। दोस्रो स्थानमा सल्लाह खोजिनुपर्ने मण्डली अगुवाहरूबाट हो। परमेश्वरले मण्डलीहरूलाई अगुवाहरू दिनुहुन्छ: उनीहरूको देखरेख गर्न, उनीहरूलाई सहायता गर्न, जसरी एउटा गोठालाले भेडाहरूसित व्यवहार गर्दछ। ईश्वरीय मण्डली अगुवाहरू “तिमीहरूका प्राणहरूका निम्ति जागा रहन्छन्” (हिब्रू १३:१७)। उनीहरूले मण्डलीका जनहरूको बारेमा विचार गरिरहन्छन्, उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिरहन्छन्, हरेकको लागि सर्वोत्तम कुरा चाहन्छन्, र परमेश्वरले उनीहरूलाई विशेष बुद्धि दिनुहुन्छ।
हाम्रो मण्डलीमा विवाहको विचार गरिरहेका युवाहरूलाई आफ्ना बाबुआमासँग कुरा गर्न र त्यसपछि आफ्ना मण्डली अगुवाहरूसँग छलफल गर्नलाई आग्रह गर्ने गर्दछौं। कुनै भाइलाई कुनै बहिनीप्रति त्यस्तो चासो छ भने, अगुवाहरूसँग कुरा नगरीकन कुरा अगाडि नबढाउन हामी आग्रह गर्दछौं। उनीहरूलाई कति कुरा थाह हुन्छ जुन कुरा युवालाई थाह हुँदैन, अनि त्यसमा अगाडि बढ्नु बुद्धीमानी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा उनीहरूले असल सल्लाह दिन सक्छन्। यस प्रकृयालाई बेवास्ता गर्नेहरूले सधैं गडबडीलाई निम्त्याएका छन्!
वास्ता गर्ने व्यक्तिहरूसँग सल्लाह खोज्नुहोस्
तपाईंलाई चिन्ने मात्र नभएर तपाईंको वास्ता समेत गर्ने, तपाईंको आत्मिक जीवनको शुभचिन्तकहरूसँग सल्लाह खोज्नु बुद्धिमानी हो। जस्तै, एक युवाले उसको आत्मिक भलाइको वास्ता नगर्ने र उसको जीवनमा त्यसप्रकारले लागिनरहने व्यक्तिबाट भन्दा उसको लागि प्रार्थना गरिरहने एउटा आत्मिक अगुवाबाट बढी असल सल्लाह पाउनेछ।
सल्लाह गम्भीरतापूर्वक (लगनशीलतापूर्वक) खोज्नुहोस् (हितोपदेश २०:५)
एकजना पास्टरको अवलोकनअनुसार “हरेक सल्लाहकार सल्लाह दिन छिटो हुँदैन। इमानदार भईकन, खोजी-खोजी एक बुद्धिमान व्यक्तिबाट सल्लाह उघाएर निकाल्नु सल्लाह खोज्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी हो। प्रायः बुद्धिमान गनिने व्यक्तिहरू हतार-हतार सल्लाह प्रदान गर्ने गर्दैनन्।”
परमेश्वरसित सङ्गतिमा हिड्दै, उहाँको वचनको ज्योतिमा रहेर सल्लाह खोज्नुहोस्
परमेश्वरलाई छोडेर मान्छेमा भरोसा गर्नु वा मान्छलाई ऊ मानो परमेश्वर भएझैं अन्धो रूपमा उसलाई मान्नु मूर्तिपूजा हो (यर्मिया १७:५-८)। हो, परमेश्वरले हामीमाथि अधिकारीहरू दिनुहुन्छ, हामीलाई सहायता गर्न शिक्षकहरू दिनुहुन्छ र तिनीहरू महत्त्वपूर्ण छन्। तर अन्तमा हाम्रो भरोसा परमेश्वरमाथि हुनुपर्छ, र हामीले उहाँबाट नै बुद्धि प्राप्‍त गर्नुपर्छ। बिल गोथार्ड (Bill Gothard) को “अधिकार” (“chain of authority”) भनिने धारणाअनुसार जेसुकै कुरा किन नहोस्, अधिकारीले जे भन्छ त्यसलाई मान्नुपर्छ अरे, तर यो बाइबलसम्मत छैन। हामीले उहाँलाई भन्दा बाबुआमालाई समेत बढी प्रेम गर्दछौं भने हामी उहाँको चेला हुन अयोग्य हुन्छौं भनेर येशूले भन्नुभयो (मत्ती १०:३७)। यसकारण यो स्पष्ट छ, त्यस्तो बेला पनि आउँछ जब हामी अधिकारीको मागभन्दा बिपरितमा चल्नुपर्ने हुन्छ। कुन अवस्थामा? त्यो अवस्थामा जब उनीहरूले हामीलाई परमेश्वरको वचनले देखाएको उहाँको इच्छाबिपरित लैजान खोज्दछन्। हामीले मानिसको भन्दा परमेश्वरको आज्ञापालन गर्नुपर्छ भनेर प्रेरितहरूले सिकाए (प्रेरित ५:२९)। हाम्रो मण्डलीको पहिलो विश्वासीहरूमध्येमा एकजाना चाहिँ टीनएज केटी थिइन्। तिनका हिन्दू बाबुआमा र दिदीहरूले उनलाई मण्डली जान मनाही गरे, तर तिनले ख्रीष्टलाई पहिलो स्थान दिइन् र परमेश्वरको वचनलाई मानेर आफूले पाएका सबै अवसरहरूमा मण्डलीमा उपस्थित भइन्। फलस्वरूप उनको पूरै परिवार प्रभुमा आएका छन्। हामीले अधिकारीहरूलाई आदर गर्नुपर्छ तर ख्रीष्ट नै हाम्रो प्रथम र एकमात्र मालिक हुनुपर्छ। पहिल्यै हामीले भनिसक्यौं, मुख्य कुरा हामी बेरियालीहरू बन्नुपर्छ र सबै कुरालाई परमेश्वरको वचनले जाँच्नुपर्छ (प्रेरित १७:११)।
एउटा कुरालाई जोड दिन हामी भुल्न चाहन्नौं कि हामीले सल्लाहलाई हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत रायले जाँच्ने होइन, न ता समाज, हाम्रा दौंतरी, आधुनिक युगको विचारधारा, मनोविज्ञान, वा अन्य कुनै कुराले नै, तर केवल परमेश्वरको वचनले मात्र।
बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने सम्बन्धी पुनरावलोकन प्रश्नहरू भाग २
हामीले बुद्धिमानी सल्लाह खोज्नुपर्छ भनेर सिकाउने एउटा हितोपदेशको पद बताउनुहोस्।
सल्लाह लिँदाहुँदी हामीलाई __________________ __________________ को आवश्यकता छैन।
बगालको उन्नति गराउन र त्यसलाई रक्षा गर्न परमेश्वरले मण्डलीहरूलाई पास्टरहरू र शिक्षकहरू दिनुहुन्छ भनेर कुन पुस्तकको कुन अध्यायमा लेखिएको छ?
बुद्धिमानी सल्लाह पाउन सकिने पहिलो ठाउँ कुन हो?
सोलोमनको छोराको गलती के थियो?
खराब सल्लाह दिने पुरानो नियमको एकजना वृद्ध व्यक्तिको उदाहरण कुन हो?
चार्ल्स स्पर्जनले उसलाई प्रचार नगर्नू भनेर सल्लाह दिने त्यस स्त्रीको सल्लाह नमान्नु किन बुद्धिमानी थियो?
ईश्वरीय सल्लाहकारहरूको __________________________ हुनु परमेश्वरले आफ्‍नो इच्छालाई अनुसमर्थन गर्ने उहाँको एउटा तरिका हो।
“धेरै सल्लाहकारहरू” पाइने सबभन्दा उत्तम स्थान कुन हो?
किन हामीले टाढाकाहरूबाट भन्दा हाम्रै नजिककाहरूबाट सल्लाह लिनुपर्छ?
बुद्धिमानी सल्लाहको निम्ति एकजना युवाले सर्वप्रथम कहाँ हेर्नुपर्छ?
मान्छेमाथि भरोसा राख्‍नु गलत हो भनेर कुन पुस्तकको कुन अध्यायले चेताउनी दिन्छ?
हामीले मान्छेको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा मान्नुपर्छ भनेर कुन पदले बताउँछ?
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-03 20:06:562020-11-13 16:23:51जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग २)